Xanuunka schizophrenia ma keeni karaa kulayl jidhka ah?
Author Topic: Xanuunka schizophrenia ma keeni karaa kulayl jidhka ah? (Read 11471 times)
« on: May 15, 2009, 10:08:18 PM »
asc walaal bacda salaan waxaan doonayaa in aan dhakhaatiirta waydiiyo su'aashan oo ah xanuunka schizophrenia ma keeni karaa jidh kulayl saayid ah weliba markaad qofka salaantid inuu xamiliwaayo gacantaada kulaylkeeda darteed.
waxaan kale oo u baahnahay ma sababi karaa xanuunkaasi(schizopheria) qoorta ama luqunta oo markasta xanuun joogta ah uu hayo?
Re: xanuunka schizophrenia ma keeni karaa kulayl jidhka ah?
« Reply #1 on: May 16, 2009, 04:41:34 PM »
Schizopheria Waa cudur saameeya Dhimirka (psychiatric Disorders), inkastoo uu si isleeg u asiibo ragga iyo dumarka, da' kastana ku dhici karo, hadana waxa uu ku badanyahay dadka da'doodu u dhaxeyso 15-30 sano.
Wuxu waxyeelaa badanaa fekerka qofka, waana tan u muhiimsan ee si ba'an uu u waxyeelo u geysto, wuu noocyo badan yahay cudurkani, waxana ka mida, (Acute schizophrenia) (Simpleschizophrenia) iyo noocyo kale oo fara badan.
Maxaa sababa schizophrenia
sababta ugu muhiimsan waxa la sheegaa inaytahay (Heredity) ama dhaxal, qofka xanuunkan qaba markaad wareysatid waxad helaysaa inay qaraabadiisa u dhowdhow ay ka cabanayeen calaamadahan oo kale.
Welwelka iyo Murugada ba'an iyo duruufaha ayaa iyaguna sababi kara.
Cudurkaan calaamadahiisa waxay noqdaan inta badan kuwa dhimirka ama dhanka caqliga ah, sida
Qofka oo fekero cidda guriga la joogto qaar ka mid ah inay qorsheynayaan dilkiisa.
Calaamado jirka ah qofku inta badan kama cawdo, kuleyl la dareemi karo ama xanuun meel jirka ka mid ahna habayaraatee malahan.
« Reply #2 on: May 19, 2009, 08:23:13 PM »
horta marka hore waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad iigusoo jawaabteen
marka labaad waxaan doonayaa in aan xanuunkaygan idiin faahfaahiyo waxaan ahay 24years ilaa intaan garaadsaday waxaan dareemayay arimo ayka mid yihiin cuqdad iyo waxyaabo badan oo igusoo noqnoqda anigoo isleh waxyaabaha qaarkood yaanay kugusoo noqon oo xasuustooda iska jir ayay hadana igusoo dhacayaan markaasaan murugo badan kala kulmayaa waxyaabaha aan dareemana waxa ka mid ah
waxa kale oo ii dheer jidhkaygu markasta waa kulayl tusaale hadii qof i salaamo uma adkaysan karo kulkayga wuxuu qofkastaa yidhaahdaa waad xumadaysantahay.
anigoo og waxa aan ka cabsanayaa ama ka shakisahay inuusan jirin ayaan hadana waxa iga maqan go'aan qaadashadii, waxaan la xidhiidhay dhowr dhakhtar midkastaana dawo ayuu ii qoray markaan dhamaystayna waxay igu yidhaahdeen waxaad u baahantahay dhakhtar ku takhasusay maskaxda anagu waxaanu nahay genaral. meeshaan joogana ma joogaan dhakhaatiir psychatrist, ah
dawooyinka aan isticmaalayna waxa ka mid ah
1.amitriptyline 25mg =3months
2.tofranil tablet 25mg =3months
3.mellaril tablet 25mg =3months
4.chlorpromazine 100mg =3months
waxbana iskagana garan ama waxba igama bedelin weli xanuunku waa sidiisii
markaa maxaad igula talinaysaan?.
weliba anigu waxaan ahay pharmacist markaa waan garanayaa systemka dawooyinka iyo shuruudohooda markaa sidaa daraadeed idinku dhibimaayo dawo ii qora laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad ii dedaashaan oo ii sheegtaan wixii awoodiina ah oo dhan. waad mahadsantihiin wsc
« Reply #3 on: May 21, 2009, 05:32:42 PM »
Barkhat waad ku mahadsantahay warbixintaada faahfaahsan, si fiican bay inooga dhacday mushkiladaadu, runtii ma ahan cillad sidaasi u weyn, dhalinyaro aad u badan ayaana ka cabanaya, waana xaaladaha nafsaaniga ah kuwa ugu sahlan, si fudud ayaa loo daaweyn karaa iyadoon loo baahan kiniiniyo iyo daawooyin fara badan, waxaana loo yaqaan (VAnxiety).
Calaamaadaha ugu muhiisan ee cudurkaan waxa loo qeybiyaa laba nooc:-
calaamado caqliga laga dareemo sida:-
- Cabsi iyo argagax iyadoo ay jirin wax cabsi abuuri kara
-Baasaysi iyo cabsi musiibooyin kusoo fool leh mustaqbalka
-dulqaad la'aan iyo dhibsasho fara badan
-Dareen denbi iyo qoomamo
Calaamadaha Jismiga laga dareemo
-Wadna garaaca oo siyaada
-Dhidid qabow gaar ahaan gacmaha
-Kuleyl daran iyo xumad
-Madax-xanuun, qofka oo dareemaya inuu cadaadis madaxa ka saaran yahay.
Calaamadahaan waxa macquul ah ineysan dhamaantood kasoo wada daahirin qofka, balse qaar badan oo ka mid ah lagu arki karo.
Waxad isaga baabi'in kartaa symbtoms-ka iyo acraadda cudurkaan si fudud, waayo qofka mutadayinka ah way sahlantahay si loo daaweeyo, adigase waxadba haysataa diinteena suuban ee islaamka, waxana aad aaminsantahay inaysan kugu dhacayn wax alle kuu qoray mooyaane.
-waxaad badsataa Nasashada iyo hurdada, waxadna yareysaa hadalka, doodda iyo jawiga buuqa ah.
-Waxaad joojisaa munashidaadka (Conditioners) ama (Stimuli), sida Kafeega, Qaxwaha, tubaakada iyo sigaar iwm.
-joogtay adkaarta iyo cibaadada kale, sida weesada, salaada ducada iwm.
-Haddii aadan weli guursan ama aadan xaas lahayn, ku dadaal inaad guursatid waayo guurku wuxu kordhiyaa sacaadada iyo farxadda nolosha, qalbiga ayaa ku raaxaysta, sidoo kale nafta ayaa ku degta..
« Reply #4 on: May 22, 2009, 12:45:03 PM »
Walaal wixii aad uga baahantahay warbixin buuxda oo ku saabsan cudurka schizophrenia halkaan ka akhriso
Halkaanne ka akhriso qoraallo ku saabsan cudurro kale oo ku dhaco maskaxda iyo siyaabha ay ku kala duwanyihiin
Halkaanne ka akhriso qaababka kala gaddisan ee loo daaweeyo cudurrada maskaxda
Wixii faahfaahin dheeraad ah waad na weydiin kartaa
Views: 4599 October 16, 2016, 06:33:09 PM
Views: 2760 January 04, 2018, 02:03:56 AM
Views: 22883 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 12930 February 22, 2010, 12:47:32 PM
Views: 10519 January 06, 2012, 10:02:19 PM